बुधबार ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौँ । साताको चौथो दिन आज बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । आज सुन ६०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको प्रतितोला मूल्य ९१ हजार २०० रुपैयाँ पुगेको छ । आज तेजाबी सुनको प्रतितोला मूल्य आज ९० हजार ७०० पुगेको छ । हिजो ९० हजार १०० रुप...
बेलचौतारा सोलार आयोजनाबाट विद्युत उत्...
भाद्र २९, 2078 तनहुँ । तनहुँको बेलचौतारामा निर्माण गरिएको सोलार आयोजनाले विद्युत उत्पादन थालेको छ । सोलार फार्म प्रालिले निर्माण गरेको आयोजनाले मंगलबारदेखि उत्पादन थालेको हो । योसँगै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पाँच मेगावट विद्युत थपिएको छ ...
भाद्र २९, 2078 काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार सेयर बजार ओरालो लागेको छ । आज नेप्से १८ दशमलव ५४ अंकले ओरालो लागेर दुई हजार ९२९ दशमलव २८ विन्दुमा पुगेको हो । मंगलबार दुई सय २२ कम्पनीको एक करोड ६३ लाख कित्ता सेयर करोबार भएको ...
मंगलबार कति छ सुनचाँदीको मूल्य ?
भाद्र २९, 2078 काठमाडौँ । साताको तेस्रो दिन आज मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार ६०० रुपैयाँ रहको छ यो हिजोकै मूल्य हो । यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार १०० रुपैयाँ त...
देउवा सरकारको अग्नी परिक्षा : आज बजेट...
भाद्र २९, 2078 काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको जारी नवाैँ अधिवेशनकाे बैठक आज मंगलबार दिउँसाे १ बजे बस्दैछ । आजकाे बैठकमा बजेटकाे प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने सरकारी पक्षकाे तयारी छ भने त्यसलाई जसरी पनि राेक्ने रणनीतिमा नेकपा (एमाले) छ । सरका...
घट्यो सुनको मूल्य, ३० दिन यताकै सस्तो !
भाद्र २७, 2078 काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ। गएको हप्ता सामान्य घटबढ भएको सुनको मूल्य नेपाली बजारमा यस हप्ताको पहिलो दिन नै घटेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपाली बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य तोला...
हिमाल आरोहीको संख्या बढ्यो, १० दिनमा ...
भाद्र २६, 2078 काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै हिमाल आरोहण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । हिमाल आरोहण शुल्क बापत पर्यटन विभागले १० दिनमा दुई करोड २८ लाख १३ हजार राजश्व संकलन भएको जनाएको छ । विभागले भदौ १५ गतेदेखि ...
घट्यो बजेटको आकार, यस्तो छ अर्थमन्त्र...
भाद्र २५, 2078 काठमाडौं । सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संशोधन गरेको छ । अर्थसम्बन्धी अध्योदशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक शुक्रबार संसदमा पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको आकार घटाएका ...
युट्युब, फेसबुकलगायतबाट आर्जित आम्दान...
भाद्र २५, 2078 काठमाडौँ । सरकारले युट्युव, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत् आर्जित आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लगाउने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरिएको सामाग्रीमार्फत् प्राप्त भुक्तानीमा बैंकमार्फत् स्वतः १ प्रतिशत कर काट्ने भएको ह...
अर्थमन्त्री शर्माद्धारा चालु आवका लाग...
भाद्र २५, 2078 काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका छन् । अध्यादेश बजेट ०७८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारका नीति तथा कार्यक्...
भाद्र २५, 2078 काठमाडौँ । साताको कारोबारको अन्तिम दिन आज शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । आज सुन हिजोको तुलनामा जम्मा १ सय रुपैयाँले बढेको हो । आज छापावाल सुन प्रति तोला ९० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहे...
नेप्सेको सुधार टिकेन, ४४ दशमलव १८ अंक...
भाद्र २२, 2078 काठमाडौं । साताको तेस्रो दिन म‌ंगलबार सेयर बजारमा पहिरो गएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज९नेप्से०का अनुसार आज बजार ४४ दशमलव १८ अंकले घटेर बन्द भएको हो । सोमबार बजार १६१।९४ अंकले उकालो लागेको थियो । नेप्सेकाअनुसार २२४ कम्पनीका...
मनकामना इन्जिनियरिङ्गले आईपिओ निष्काश...
भाद्र २१, 2078 काठमाडौँ । मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेडले आईपिओ निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले शेयर निष्काशनको लागि बि.ओ.के. क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । सम्भौतामा मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावरको तर्फब...
पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर...
भाद्र २१, 2078 काठमाडौँ । शेयर बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थिति समाधान गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र वैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार अर्थमन्त्री शर्माले टेलिफोन गरेर पुँजी बजारको पछिल्लो पर...
साताको दोस्रो दिन नेपाली बजारमा सुनको...
भाद्र २१, 2078 काठमाडौँ । साताको दोस्रो दिन आज सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ । आज सुन आइतबारको तुलनामा १ सय रुपैयाँले घटेको हो । आइतबार ९१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज सोमबार एक सय रुपैयाँले घटेर ९१...